अनुदान र सहुलियतको व्यवस्थालाई किसानले किन लत्याए ? | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार अनुदान र सहुलियतको व्यवस्थालाई किसानले किन लत्याए ?
on: March 22, 2019 प्रदेश समाचार
चैते धान खेती विस्तारमा किसानको आवेदन नै परेन
चैत ८, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जिल्लामा १ हजार हेक्टरमा चैते धान खेती विस्तारमा किसानको आवेदन नै परेको छैन । चैते धान खेती विस्तारका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय धनगढीले सूचना जारी गरेपनि उक्त खेती विस्तारका लागि कृषकले खासै चासो नदिएको मन्त्रालयले बताएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तराईका कैलाली तथा कञ्चनपुर र पहाडका तीन जिल्ला गरी पाँच जिल्लामा चैते धानखेती विस्तार गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
प्रदेशभित्रका कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम र बैतडीमा गरी पाँच जिल्लामा १ हजार हेक्टरमा चैते धान खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कैलालीमा ५२५ हेक्टर, कञ्चनपुरमा ४०० हेक्टर, डोटी, अछाम र बैतडीमा २५÷२५ हेक्टरमा चैते धान खेती विस्तारको लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।
सो कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान, धान चुट्ने मेसिन २०० थान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले गत पुस २५ गतेदेखि माघ १० गतेसम्म सूचना जारी गरी किसानहरुबाट आवेदन माग गरेको थियो । कैलाली, कञ्चनपुर र अछामबाट ४२० हेक्टरको लागि मात्रै किसानको आवेदन परेको मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत जनकराज बोहराले बताए । बाँकी ५८० हेक्टरको लागि कुनै आवेदन नपरेको उनले जानकारी गराए ।
अनुदान तथा सहुलियतको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि किसान उत्साहित नहुनु सूचनाको अभाव भएको हुन सक्ने कतिपय अगुवा कृषकहरुको भनाइ छ । अनुदानभन्दा बढी ढुवानी र भाडा खर्च लाग्ने भएकाले पनि कतिपय कृषकहरु यो खेती विस्तारप्रति आकर्षित नभएको हुन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।